Raiisulwasaaraha iyo Wasiirka Arrimaha Gudaha Oo Isku Mari La’a Arrinta Taabit – Hornafrik Media Network
Raiisulwasaaraha iyo Wasiirka Arrimaha Gudaha Oo Isku Mari La’a Arrinta Taabit
Wasiirka Arrimaha Gudaha Cabdi Maxamed Sabriye oo ka mid ahaa wafdiga Madaxweynaha ee ku sugnaa Magaalada Guriceel ayaa shalay loo yeeray in uu safarkiisa soo gaabiyo, kaddib markii Ra’iisul wasaare Kheyre oo ka yimid codsiga.
Shir degdeg ah ayaa Ra’iisul Wasaaraha iyo Wasiirka Arrimaha Gudaha ay yeesheen, kaasoo looga hadlay xaalada Gobolka Banaadir.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Ra’iisul Wasaare Kheyre uu ka codsaday Wasiirka in uu soo qoro qoraal soo jeedin ah oo xilka looga qaadayo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed.
Warqada soo jeedinta ayuu Ra’iisul wasaaruhu dalbaday in lagu xuso eedaymo musuq maasuq ah, isagoo cuskanaya qoraalka isla shalay ka soo baxay xafiiska Madaxweynaha. balse Wasiir Sabriye ayaa ka biyo diiday inuu qoro Warqad noocaas ah, isagoona ku adkaysanaya in waqti la siiyo uu arrintan ku xaliyo, waxayna kala tageen Raiisulwasaare Khayre iyo Wasiir Sabriye iyagoo u muuqda inay is mari waayeen, kuna kala caroodeen aragtiyadda ay kala qabaan oo mid kasta ku adkaysanayo in tiisa la raaco.
Maxaa la gudboon Wasiirka ?
Inkastoo Wasiir Sabriye aanu wali xafiiska fariisan, isla markaana shaqada qaban, waxaa markii la magacaabay uu durbaba ku mashquulay safarkii Madaxweynaha ee uu ku tagay gobolada dalka.
Lama oga go’aanka uu qaadan Wasiirka, balse waxaa la sheegayaa in Wasiirka dalbaday in waqti la siiyo, si uu arrinta u galo, isla markaana la kulmo labada dhinac.
Cabdi Maxamad Sabriye oo ah nin ganacsade ah oo aan siyaasada horay ugu jirin ayaa xilka loo magaacabay 4-tii bishan, wuxuu hada wajahayaa labo daran mid dooro, taasoo ah inuu raaco Ra’iisul Wasaarihii magacaabay ama dhinaca Beelaha Muqdisho.
Sida la og yahay magacaabidiisa waxay dowladda ka damacsaneyd inay ku yareyso xiisadaha siyaasadeed ee ka imaanayay Beesha uu wasiirka ka dhashay, gaar ahaan dhacdadii Guriga C/raxmaan C/shakuur lagu weeraray iyo tii Guriga Cabdi Qeybdiid, labadaas dhacdana wali xal looma helin.
Hase ahaatee hadii Wasiirku lugaha la galo xasarad ka dhex aloosan xubno isku aragti ka ahaa xaalada siyaasadeed ee dalka, isla markaana isku koox ahaa, waxay taabanaysaa xaalad kale oo ah dadka degan Beelaha Muqdisho, iyadoona ay dhici karto inuu waayo Wasiirku Kalsoonidda beelaha uu matalo.
Muxuu salka ku hayaa cadaadiska siyaasadeed ee la saaray Guddoomiyaha G/Banaadir ? (Warbixin)
Golaha Shacabka: Ma Jirto Cid Kale Oo Awood Sharci u Leh Ka Go’aan Gaarista Maqaamka Muqdisho